Gollaha Amniga oo ka shiraya arrimaha Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Gollaha Amniga oo ka shiraya arrimaha Soomaaliya
Shirkan oo albaabada u xiran ayaa waxaa ku baaqday in la qabto dowladda Ingiriiska, oo si aad ah ugu lug leh arrimaha siyaasadda Soomaaliya.
NEW YORK, USA - Gollaha Amaanka ee QM ayaa Maanta yeelanaya kulan gaar ah oo albaabada u xiran, kaasoo looga hadlayo Xaaladda cakiran ee ka taagan Soomaaliya.
Ingiriiska ayaa dalbaday kulankan in la qabto si go'aanno looga gaaro xaaladda Soomaaliya iyo khilaafka arrimaha doorashadda kadib markii uu dhamaadey mudo xileedkii Farmaajo, islamarkaana ay mucaaradka sheegeen inay qaadayaan tallaabooyin ku aadan masiirka dalka.
Farmaajo ayaa waqtigiisa ku ekayd shalay, iyadoo uusan sameyn hanaan doorasho oo dalka uga guurayo marxaladdan dowlad la'aanta ah, oo keentay inuu yimaado firaaq dastuuri ah, waxaana laga digayaa inay dhacaan fowdo iyo qalaanqal siyaasadeed.
Afhayeenka QM Stephane Dujarric ayaa sheegay inay wali jirto fursad ay isagu imaan karaan madaxda siyaasadda Soomaaliya, islamarkaana ay xal uga gaari karaan xaaladda taagan, sidoo kalena ay ku qaban karaan doorashooyin deg deg ah.
Wuxuu Stephane Dujarric xusay inaan loo baahnayn in la burburiyo hay'adaha dowladeeda ee ka jira dalka, kuwaasoo si dhib leh lagu soo dhisay, isagoo ugu baaqey madaxda Soomaaliya inay wadahadlaan, si looga badbaadiyo dalka inuu dib ugu laabto dagaalkii sokeeye.
Sida ku xusan barnaamijkeeda billaha ah, London waxay markii hore qorsheysey fadhiga Gollaha Amniga 22-ka bishan, ka hor inta aan la cusbooneysiin howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, kaasoo dhacaya 28-ka February.
Farmaajo iyo hogaamiyaasha Maamul Goboleedyada waxay galeen September kaasoo u gogol xaaraya doorashooyinka dadban ee Baarlamaanka iyo Madaxtinimada oo la qorsheeyay dabayaaqadii 2020 iyo horaanta 2021
Laakiin way kala tageen markii buuqii ka dhashay sida loo qabanayo codbixinta, iyadoo Shirkii Dhuusamareeb uu burburey daqiiqadihii ugu dambeeyay Jimcihii lasoo dhaafay, waxayna ahayd fursadii ugu dambeysay ee rajada laga qabey in doorashadda lagu qabto.